Vonona ho an'ny tontolon'ny asa ve ny iPad? | Vaovao IPhone
Efa ho telo taona lasa izay ny iPad dia natolotr'i Steve Jobs tamin'ny fomba ofisialy ary nahagaga fa hitantsika ny nidiran'ny fitaovan'ny finday an'i Apple tao amin'ny sehatra iray izay tsy nantenainay ny hahita azy, noho ilay orinasa Nanomboka nampiasa ny takelaka vita tamin'ny Cupertino tamin'ny lafiny lehibe kokoa izy ireo tao anatin'ny fikambanan'izy ireo.
Ny fisaintsainana ny etsy ambony dia misy fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny maro, dia ny iPad ho an'ny tontolon'ny asa?Ampy izay raha milaza fa ny ankamaroan'ny orinasa Fortune 500 dia mizaha toetra na mampihatra iPad ankehitriny ampiasain'ny mpiasan'izy ireo, miampy orinasa marobe misahana ny lozisialy toa ny SAP sy Oracle no manandrana manome tohana feno azo atao amin'ilay sehatra, izay manakiana azy fahombiazana tanteraka
Mazava ihany koa fa nahatsapa an'io i Apple, tsy ho an'ny tsy misy no misy a fizarana natokana manokana ho an'ny iPad ao amin'ny orinasa amin'ny tranokala ofisialiny, ary koa a fanangonana fampiharana manokana ao amin'ny App Store, izay Mazava ho azy fa misy ny biraon'ny birao iWork sy ny fampiharana antoko fahatelo toa ny GoodReader, AutoCAD WS, SAP Business Pbjects, OmniGraph Sketcher, iSSH, FTP On The Go ary maro hafa, satria fantatrao fa tsena manokana io dia tena zava-dehibe fa na dia eo amin'ny sehatry ny smartphone aza izy ireo dia nanomboka nanala BlackBerry, angamba amin'ny takelaka misy azy ireo dia sarotra kokoa izy ireo na eo aza ny fironana miakatra izay manomboka hita (tadidio fa mety hangalatra ny tranokalanao amin'ny kahie atsy ho atsy ireo).
1 Ny lamaody sa zavatra nijanona?
2 Inona avy ireo tombony azo avy amin'ireo fitaovana ireo?
Ny lamaody sa zavatra nijanona?
Na izany aza, io fironana io dia mety tsy maharitra, farafaharatsiny izay inoan'ny mpandalina. Hevitra sy paikady misimisy kokoa, Patrick Morrhead, iza no mieritreritra an'izany mety vetivety fotsiny ity, satria raha toa ka mety hiatrika fanamby tena izy ny fanjakan'ny iPad amin'ny orinasa, io fotoana io dia izao, noho ny fahatongavan'i Windows 8 ary solosaina toa ny Dell Latitude 10, ny ElitePad Hewlett-Packard 900, ary ny Lenovo ThinkPad Tablet 2.
Inona ny tombony amin'ireo fitaovana ireo?
Ilay mpandalina voalaza etsy ambony dia milaza fa manana bateria azo soloina mpampiasa-namana sy maharitra, manana androm-piainana lava kokoa noho ny iPad; Faharoa, ireo solosaina Windows 8 ireo dia azo itarina Tsy toy ny takelaka Apple, satria manana seranan-tsambo, mpampifandray, ary slot ho an'ny memozy bebe kokoa izy ireo, saingy angamba ny tena zava-dehibe, dia samy manana ny maha izy azy izy rehetra. fanohanana ho an'ny lehibe fitaovana fitantanana sy fiarovana serivisy fandraharahana (mpitantana mari-pahaizana, mpanjifa VPN, Directory Directory, sns.).
Morrhead dia nilaza fa ny ankamaroan'ny orinasa dia naka vahaolana teknolojia nandritra ny taona maro izay mitaky fotoana, fikarohana, fanandramana, fiofanana ary loharanom-pahalalana mazava ho azy hampiharina, noho izany tsy ny rehetra no vonona ny hampiasa vola be mba hampidirana ny iPad amin'ny môdeliny.
Raha ny fahitako azy dia mety manana antony kely amin'ny famakafakana ataonao ianao, na izany aza, araka ny efa noresahiko teo aloha, misy orinasa manan-danja marobe natokana ho an'ny fampandrosoana rindrambaiko fandraharahana izay nitodika tany amin'ny sehatra Apple ary nahita tsena manokana niavaka ho azy ireo ihany koa, koa mihombo ny fampidirana ny fitaovan'izy ireo, ankoatry ny fankasitrahana ny malaza sy tato ho ato izay malaza be Ento ny fitaovanao manokana (ento ny fitaovanao manokana), politika iray izay nampiharina tsikelikely tao amin'ny orinasa tao anatin'ny telo taona lasa ary maro ny milaza fa ny fahatongavan'ny iPad no nahatonga izany.
Ny fikarohana vao haingana dia nampiseho fa farafaharatsiny ny 81% amin'ireo mpanjifa no mampiasa ny fitaovany any am-piasana ary izany koa ankoatr'izay manampy azy ireo hamokatra bebe kokoa. Betsaka amintsika aza no mahatadidy fa niantomboka tamin'ny tale jeneralin'ny orinasa mihitsy izany, nangataka tamin'ny mpitantana ny IT ny hanamboarana ny takelaka hiasan'izy ireo amin'ny kaonty mailaky ny asany.
Ho fehiny, SI, ny iPad dia vonona ny hahatratra ny tontolon'ny orinasa ary raha ny marina dia efa napetraka amin'ny toerana manan-danja ao anatiny izy io noho ny anton-javatra samihafa manohana fa tsy hoe hiara-hiasa amin'ny Apple na ny developer fotsiny, ka mahatonga ny fironana ankehitriny tsy ho vita mihitsy hivadika ho an'ny Dell, HP, Lenovo na iza.
Fampahalalana bebe kokoa - Ny takelaka dia manjaka amin'ny tsenan'ny kahie amin'ny 2013
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Vonona ho an'ny tontolon'ny asa ve ny iPad?
Masinina Phrasal Verbs, fomba mahafinaritra hianarana verba sy ny prepositions amin'ny teny anglisy
Cyueue: mamorona lisitra ahafahanao milahatra hira (Cydia)